Umdibaniso: Sebenzisa iNethiwekhi yakho ukuze uvale ukujongana ngakumbi neli Qonga lobuhlakani bobuchwephesha kunye nohlalutyo | Martech Zone
Ulawulo olumndilili lobudlelwane babathengi (CRMIsisombululo liqonga elihle elimileyo… isiseko sedatha sokudibanisa, imisebenzi yabo, kunye; mhlawumbi, ezinye indibaniselwano nezinye iinkqubo ezibonelela ngengqondo eyongezelelweyo okanye amathuba okuthengisa. Kwangelo xesha, lonke uqhagamshelo kwindawo yogcino lwedatha yakho lunamandla, unxibelelwano olunempembelelo kwabanye abathengi kunye nabenzi bezigqibo kwishishini. Olu lwandiso lwenethiwekhi yakho alufakwanga, nangona kunjalo.
Buyintoni Ubukrelekrele boBudlelwane?
Ubuchwephesha bobuchwephesha bobudlelwane buhlalutya idatha yeqela lakho kwaye lwenze ngokuzenzekelayo igrafu yobudlelwane efunekayo ukufezekisa izinto eziphambili zeshishini. Igrafu yobudlelwane iveza umbono opheleleyo wokuba ngubani owaziyo iqela lakho kwaye libazi kangakanani, ngaloo ndlela ikubonisa iindlela ezilungileyo zokwazisa okanye ukuhambisa.
Kutheni le nto ukuThengisa okusekwe kwiAkhawunti kunye nobuhlakani bobuhlakani iyiManyano egqibeleleyo
Ukuhambelana kufana nokudibanisa i-LinkedIn kunye ne-Salesforce, kuphela nge-Artificial Intelligence ukuqonda amandla obudlelwane (ngokungafani ne-LI) kunye nezixhobo ezizisebenzelayo zokukhupha iintlungu kulawulo lweCRM. Itekhnoloji yenkampani enelungelo elilodwa lomenzi wayo kwaye ihlalutya ngaphezulu kweebhiliyoni zamanqaku edatha kwii-imeyile, kwiikhalenda, kunye nakwimithombo yomntu wesithathu ukubonelela abasebenzisi ngezixhobo abazidingayo ukuze bazilawule ngokuzenzekelayo ubudlelwane babo obubaluleke kakhulu, babeke phambili unxibelelwano olubalulekileyo, kwaye bafumane amathuba angafumanekanga.
Ubuntu ngokuzenzekelayo ibamba lonke unxibelelwano Iqela lakho linonxibelelwano okanye umbutho. Ikwacebisa nayiphi na iprofayile eneenkcukacha eziphambili zobudlelwane ezinokuthi zingabandakanywa kwimithombo yedatha yomntu wesithathu njengeCrunchbase, i-Clearbit, kunye nedatha yakho yobunini.
Ubuntu retroactively yenza iRolodex ebonakalayo Kuzo zonke iinkampani kunye nabantu iqela lakho eliye lasebenzisana kunye nokuyihlaziya ngexesha langempela.
Umanyano lomanyano likuvumela ukuba Nxibelelana nabanye abangaphandle kweqela lakho Ukuqonda ukuba ngubani kwinethiwekhi yakho onokubonelela ngeentshayelelo ezibaluleke kakhulu.
I-Affinity Analytics sisixhobo esikhethekileyo, esinexesha lokwenyani esibonelela ngemibono yecandelo lokuqala kubudlelwane bangaphandle beqela kunye nendlela unxibelelwano lwabo olukuchaphazela ngayo ukuhamba kwenkampani, imibhobho, imisebenzi yenethiwekhi, kunye nezinye izikhombisi zentsebenzo eziphambili. Ngoku iyafumaneka ngokudityaniswa kobukrelekrele beshishini kunye neqonga lokuhlalutya elivela kwiLifu likaGoogle, Jonga, I-Affinity Analytics iza njengenxalenye edityanisiweyo yohlelo lwePrimiyamu kunye neShishini yeqonga lokuzibandakanya okanye njengokuhlaziya abathengi beNgcali.
I-Affinity Analytics yakhela kwidatha engundoqo kwi-Affinity yobudlelwane beqonga lobukrelekrele ukubonelela ngokuqonda okunzulu kwidatha yeCRM yeqela. Ngelixa uninzi lweqonga leCRM libonelela kuphela ngezona zinto zisisiseko, amandla okwenza ingxelo, iAffinity Analytics ibonelela ngeedashbhodi ezinokuthi zenziwe ngokwezifiso kunye nembumba, iingxelo zexesha lokwenyani ukunceda iinkampani ukuba ziqhube uhlalutyo olunzulu kwiindlela kunye nabaqhubi abasebenza ngokuchaphazela iinkqubo zeshishini.
Ngaphezulu kweengxelo ezingama-20 zokubonisa ziyafumaneka kulo naluphi na uluhlu ngaphakathi kweqonga lobukrelekrele lobudlelwane. Zonke iingxelo zinokuntywila nzulu ngokusekwe kumacandelo esiko anje ngokuma nkqo kumzi mveliso, uhlobo lwenkampani, ubungakanani benkampani, kunye nezinye izinto. Abasebenzisi banokuthumela ngokulula okanye bathumele nge-imeyile naziphi na iingxelo ukuze babelane ngazo nabachaphazelekayo.
Ukusekwa kwedatha egcweleyo kunika iinkampani ukubonakala kwexesha lokwenyani ekusebenzeni kweqela labo kwaye zibenze bakwazi ukuqhubekeka kwidatha ukuze bafumane iimpendulo kwimibuzo malunga nokuba bangayityala phi kwaye njani imali yemizamo yeqela labo. Ngelixa amashishini enokwakha naliphi na inani leengxelo ezinokwenziwa ngokwezifiso kunye ne-Affinity Analytics, iingxelo ezimbini esele zipakishwe zibandakanya:
Uhlalutyo lwefaneli: Inika amandla iinkampani ukuba zilandelele ukusebenza kombhobho wazo ngokuhlalutya onke amanqanaba enkqubo yesivumelwano, kubandakanya ukuguqulwa kwamanqanaba kwinqanaba ngalinye, ixesha eliqhelekileyo elihlala lihleli kwinqanaba ngalinye, umsebenzi wokugqibela ngaphambi kokuba isivumelwano siphumelele okanye siphulukane, apho ezona zivumelwano zibalaseleyo Ukufunxwa, nangaphezulu.
Iingxelo zoMsebenzi weQela: Ukubonelela ngohlalutyo lwee-imeyile zeqela, iminxeba, iintlanganiso kunye neminye imisebenzi, eyaphukileyo ngumzi-mveliso, ingingqi, kunye nokunye, ukubonelela ngengqondo ebalulekileyo ekusebenzeni kweqela kunye nempumelelo okanye ukusilela kunxibelelwano lwabo nethemba okanye abafowunelwa.
Iqonga lokuzibandakanya linceda abasebenzisi ukulawula ubudlelwane phakathi kwabantu abazizigidi ezingama-30 kunye nemibutho ezizigidi ezisixhenxe. Nge-Affinity Analytics, abasebenzisi ngoku banolwazi olongezelelekileyo kunxibelelwano lwabo nabafowunelwa bangaphandle kunye nendlela enokuthi yenziwe ngayo ukuphucula intsebenzo kunye nolawulo lwemibhobho.
Funda ngakumbi malunga nokuBambisana Funda ngakumbi malunga nokuHlola koBumbano
tags: ukudibanauhlalutyo lobumbanoaikukubhadla okungeyonyaniCRMidatha yecrmulawulo oludibene nabathengiUhlalutyo lwefanelijongaulwalamano lobukrelekreleubudlelwane beqonga lobukrelekreleumsebenzi weqela lokuthengisa